အလှဆုံးအမျိုးသမီးတွေဣတ္စတိုင်ဝတ်ဆင်ရန်ပိုနှစ်သက်။ တောင်မှမိန်းကလေးငယ်များသူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင့်ရဲ့ image ကိုပိုပြီးဣတ္စေနိုင်ရန်အတွက်စဉ်းစား, သီးသန့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် T-ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဣတ္အဝတ်အစားများရွေးချယ်ခြင်းကို (ဥပမာ, ကိုတစ်ဦးအလွန်နက်ရှိုင်းသော neckline သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်အတိုအဝတ်) ထပ်. အတင်းအကြပ် sexy အလွန်လင်းလင်းလမ်းကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးစွန့်စားမှုရှိသတ်မှတ်။
မူအရ "ဣတ္စတိုင်" ၏အယူအဆအတော်လေးစိတ္တဇဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဣတ္နှင့်ပြိုင်ကားဆန်သောမတ်မတ်ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။ ဤတွင်, ကစနစ်တကျရှေးခယျြသောအဝတ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဖန်တီးနေတဲ့ဣတ္ပုံရိပ်ကိုပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ဣတ္ဗီရို၏အဓိကဘာသာရပ််စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဣတ္စတိုင်အတွက်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ပုံမှန်ဘယ်ဟာပါလဲ? ခါး, ရင်ဘတ်, ခြေထောက် - - ဒါဟာအမျိုးသမီးကိန်းဂဏန်းများ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးပေးဖို့အကျိုးရှိသောဖြစ်ရမည်သဘာဝပေးသနားတော်မူကြောင်းကိုအတို, အရာအားလုံး၌တည်၏။
သငျသညျဣတ္, ဝတ်ဆင်ပြိုင်ကားဆန်သောနှင့်အဆင်ပြေနေဖို့လိုသလား? ပြိုင်ကားဆန်သောစတိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ရှေးခယျြမှုရပ်တန့်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ် - ကများသောအားဖြင့်သဘာဝကပစ္စည်းကို လုပ်. , အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒုတိယပေါင်းအားကစားဝတ်စုံ - ရိုးရှင်းသောဖြတ်, ဒါကြောင့်ဒီမတ်မတ်လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ အားကစားစတိုင်ဆင်မြန်းလျောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခမဲ့ပေမယ့်အမြဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤအရည်အသွေးတွေရှိနေသော်လည်းအားကစားဝတ်စုံမျက်စိ-ဖမ်းခြင်းနှင့်ဖြားယောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အတွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းရိပ် ပြိုင်ကားဆန်သောဆင်မြန်း အလွန်ကွဲပြားခြားနား။ လူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝအအရောင်များ - အညိုရောင်, မီးခိုးရောင်, khaki ၏အဖြူ, အရိပ်။
အော်စကာရဲ့ style အတွက်ပါတီ - အဝတ်အထည်
ခေတ်သစ် Pin-Up ကို
အဆိုပါ Avant-garde စတိုင်အဝတ်အစားတွေအတွက်
တင့်တယ်ရှည်လျားစားဆင်ယင် - တိုင်းအရသာအဘို့အအလှဆုံးဆင်မြန်း၏ 56 ဓါတ်ပုံ
အပြည့်အဝအဘို့ဖက်ရှင် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2016-2017
အဆိုပါရတနာဖို့ချီတက် - မူလမင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအနံ့ - လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့?
သခွားသီး - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
အဆိုပါနှိုင်းယှဉ် Vikander ၏မျက်နှာသာမ: Larry က Croft ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘောင်ရဲ့ Refresh Saga မှတုံ့ပြန်မှု
Delirium tremens - လက္ခဏာတွေ, ကုသမှုနှင့် delirium tremens ၏အကျိုးဆက်များ